Microsoft Office 365 na SharePoint: Njikọ zuru okè | Ọ BỤ
Iji SharePoint na-arụ ọrụ
SharePoint na Office
Microsoft Office nwere ọchịchọ nke ịbụ ihe nlekọta nke ebe ọ bụla na-arụ ọrụ, na Office 365 dị nnọọ aka nyere aka nchịkwa. Nche igwe ojii siri ike Skyhigh Networks chọpụtara na nchịkwa bụ ihe kachasị jiri igwe ojii mee ihe site n'aka onye ahịa. Otu n'ime uru kasịnụ nke ngwa a maara nke ọma bụ na ọ bụ dị ka iwu na-ejikọta na ngwanrọ azụmahịa ndị ọzọ, na-eme ka arụmọrụ na arụmọrụ dị mma.
As Office 365 gbanwee dị ka ọkọlọtọ na-aga n'ihu, otú ahụ ka SharePoint, ọrụ Microsoft na-arụkọ ọrụ. Iji SharePoint na-arụ ọrụ, ndị otu nwere ike ịkwado ọrụ yiri nke a, na mmelite nwere ike ịnweta ngwa ngwa. Kama inwe nsogbu nke akwụkwọ ozi n'ihu na azụ, ndị ọkachamara nwere ike ịbanye n'otu ebe wee hụ nsụgharị kachasị ọhụrụ nke akwụkwọ ọ bụla.
Iji bụrụ ihe bara uru n'ezie, bụrụ na dika o nwere ike, ndokwa abụọ ahụ kwesiri ịdị na-akparịta ụka, dịka obosara na alụmdi na nwunye na-adịghị mma. Nke a bụ ihe abụọ ndị na-enyocha IT kwesịrị iche banyere itinye n'ọrụ Microsoft Office 365 na SharePoint na ngalaba yiri nke ahụ na inwe ha na-arụkọ ọrụ ọnụ.
Iji mee ka otu ọrụ a dị ọcha, ejikọta SharePoint ka Office 365 na-eme site na njikọ Njikọ na Office na SharePoint Server. N'ebe ahụ, ị ​​nwere ike ịgụnye, ilekọta, ma wepụkwa mkpakọrịta na ngwanro ahụ. N'ọnọdụ ọ bụla, nkọwa nke ịbịakọta nke abụọ ahụ bụ nnọọ n'oge na-adịbeghị anya n'abalị pụrụ iche - na ọ bụ nanị obere obere usoro. Ndị otu gị ga-echekwa oge ị ga - esi rụọ ọrụ na di na nwunye ọhụrụ ahụ.
N'agbanyeghị na ịchọpụta ihe ndị a ga-eme site na SharePoint, ndị nlekọta ga-ahọrọ onye kwesiri ịnye echiche ma gbanwee ikike maka nchịkọta SharePoint ọ bụla, na otu a ga-esi elekọta ikike ndị a na-enwe ọganihu. Ka ndị ọrụ na-aga n'ihu ma ọ bụ na-aga n'ihu, ịmepụta usoro na usoro maka mgbanwe ikike dịka nke a ga-eme n'ụzọ dị mfe bụ ihe dị mkpa.
Mmekọrịta na-eme ka ezigbo ọrụ alụmdi na nwunye rụọ ọrụ, na SharePoint na-egosi otú ha ga-esi meghee ọnụ ha site na ya na Office 365 na ahịa ahịa ya. Dị ka Microsoft na-egosi na ibe weebụ ya, SharePoint na-egosi na onye ahịa ikpeazụ site na mmemme weebụ, ebe ha nwere ike ileba anya na ihe dị iche iche. Ndị ahịa nwere ike ịchọ akwụkwọ, nyefe faịlụ na OneDrive, na-arụkọ ọrụ na ndị ọzọ, ma ọ bụ nyefee otu faịlụ ha dị iche iche. Oge obula, enwere ike inye ndi otu aka n'ime SharePoint. Ntugharị nke a na-eme ka ọ dị mfe maka ìgwè ahụ dum na-amata ihe na-eme ma na-eme ka ọ na-emeghe kpamkpam site na mmemme weebụ ọ bụla.
Tupu ibuli ngwa oru aka dika SharePoint, ichikota ichikota bu nrọ ojoo - obu ezie na ndi enyi ahia. N'oge ahụ, mgbe onye ọkachamara mere akwụkwọ na Microsoft Word ma ọ bụ Excel ma zite ya site na email, onye ahụ ga-abara ọnụ nwere ike ịhụ ntụgharị ihe eji emegharị. Ọ gwụla ma ndị na-erite uru na-eji Track Changes tupu ha agbanwee akwụkwọ ahụ, ìgwè ahụ ga-achọghachi azụ azụ ma ọ bụrụ na mgbanwe gbanwere.
Ma, taa, ọkwá dị elu nke Microsoft SharePoint abụghị naanị na-ezipụ na mmejọ ndị sitere na ụdị dị iche iche ma ebe ọ bụ na mmadụ niile na-arụ ọrụ n'otu ebe ahụ, ọ na-agụnye akụkọ ihe mere eme nke na-enyere ndị ahịa aka ịchọta ihe dị iche iche nke akwụkwọ.
N'agbanyeghi na enwere uzo di iche di iche iche, Microsoft PowerPoint bu ugbua amara kachasi nma maka mmebata. N'ọnọdụ ọ bụla, site na njikọ ọhụrụ a, ị gakwaghị anọ n'ọnọdụ yiri nke ahụ maka ndị mmekọ azụmahịa. Iji SharePoint na-arụ ọrụ, ị nwere ike ịnyefe mmemme PowerPoint gị na ndị ahịa na ndị na-emekọ ihe ọnụ n'elu ụwa na naanị di na nwunye clicks. N'agbanyeghị ma ị na-etinye ya n'ọrụ na mkparịta ụka vidiyo ma ọ bụ na-enweghị onwe ya, nke a ga-enyere gị aka ịchekwa oge na akụ.
N'ọgbakọ kachasị mma, mmegbu na-arụ ọrụ iji wusi ibe ha ike. Isi ihe ngosi SharePoint gụnyere ins na-eme Microsoft Office ihe na akwụkwọ ndị ọzọ na-enye aka. Otu ihe kachasị mma bụ DocuSign, nke nwere ike ịgbakwunye njirimara ikike maka nkwekọrịta, nkwenye, na akwụkwọ dị iche iche. Ebe ọ bụ na akụkụ ka ukwuu nke nke a na-emeso n'ime SharePoint, ndị ọkachamara nwere ike ime ka usoro dị mgbagwoju anya na-esighị ike, na-edebe ihe niile n'otu ebe ka ọ bụrụ na ị naghị achọ ihe ndị ọzọ na-esonụ.Ọmụmụ Ihe Ọzụzụ Microsoft
Microsoft Office 365 ejiri igwe ojii mee ihe kachasị amara ọrụ ụlọ ọrụ, na-eme ka ọ dị ntakịrị ịchọ nlekọta ego. Na mgbe mgbe Office 365 ejikọtara ya na SharePoint, ndị ọchịchị nwere ike ịtọ ntọala ebe ndị ọrụ ibe ha nwere ike na-enweghị ọtụtụ n'ime ndị ọrụ gbasiri elu ma na-enye ndị mmekọ dị elu. Ngwaahịa ikpeazụ ga-abawanye na arụmọrụ, nke pụtara na onye ọ bụla ga-emezu ihe ka njọ, na-enyere azụmahịa aka ngwa ngwa.
Dịka onye nchịkwa na-enwe olileanya irite uru site na ihe ndị Microsoft a maara nke ọma, enwere ụfọdụ ihe ị ga - eme iji jide n'aka na ị nwere ikike pụrụ iche na mmụta iji mee ka alụmdi na nwunye rụọ ọrụ. Maka ụfọdụ ndị na-enwe olileanya ịmepụta ikike iji tinye Microsoft Office 365 na SharePoint n'ọrụ, nzọụkwụ mbụ na-enweta mgbe niile Microsoft MCSA: Asambodo Office 365.
Ozugbo ị aced Office 365, mee ka gị na Microsoft jikọọ na ọkwa na-esonụ MCSE: Nrụpụtaghị iji merie SharePoint.